Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliland Oo Xaqiijisay Kiis Coronavirus Ah – Goobjoog News
Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliland Oo Xaqiijisay Kiis Coronavirus Ah
Xukuumadda Muuse Biixi ee Soomaaliland ayaa maanta waxa ay oo saartay war ku aaddan kiis cusub oo Coronavirus ah kaas oo laga helay deegaanada maamulkaasi, iyadoo horay Soomaaliland looga xaqiijiyay kiisas COVID-19 ah.
Wasaarada caafimaadka ee somaliland ayaa sheegtey 1 qof oo kale oo cusub in laga helay xanuunka COVID-19, waxaana kiiskaan cusub uu sare u qaadayaa tirade guud ee kiisaska laga xaqiijiyay deegaanada maamulka Soomaaliland.
Qoraal ka soo baxay wasaarada caafimaadka waxey ku sheegtey in hal qof oo hore uu u haleelay coronavuris uu haatan ka bogsadey xanuunkaasi.
Si kastaba, tirada guud ee dadka hada qaba COVID-19 ee somaliland ayaa ah 5 qof.
Halkaan ka akhriso warqadda ay soo saareen.
Maamulka Puntland oo Kordhinaya Goobaha Lagula Tacaalayo Xanuunka Coronavirus
Madaxweynaha Puntland Oo Sameeyay Magacaabis